Ithegi: econsultancy | Martech Zone
Indlela Machine Learning and Acquisio Uya Khulisa Business lakho
NgoLwesibini, Julayi 5, 2016 UDavid McIninch
Ngexesha lotshintsho kwimizi-mveliso abantu basebenza njengezinto kumatshini, bemi ecaleni kwendibano, bezama ukuzenza basebenze ngomatshini kangangoko. Njengokuba singena koko kubizwa ngokuba yi "4th Industrial Revolution" siye samkela ukuba oomatshini bangcono kakhulu ekusebenzeni ngoomatshini kunabantu. Kwilizwe elibalekayo lentengiso yokukhangela, apho abaphathi bephulo balungelelanisa ixesha labo phakathi kwamaphulo okwakha ngobuchule, kunye nolawulo lobuchwephesha kunye nokuhlaziya
Ukunyuka kweNtengiso esekwe kuBantu kunye neNtengiso
NgoMvulo, Aprili 25, 2016 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kwiphepha labo elimhlophe kwiNtengiso esekwe kuBantu, iAtlas inikezela ngezibalo ezithile ezinomdla kwintengiso esekwe ebantwini kunye nentengiso. Ngelixa uchitha ixesha elininzi kwiselfowuni ngokubanzi, ama-25% abantu basebenzisa izixhobo ezi-3 okanye nangaphezulu ngemini, kwaye ama-40% abantu batshintshela izixhobo ukugqibezela umsebenzi Yintoni ukuThengisa okuSekwe kuBantu? Ezinye izicelo kunye namaqonga anika abathengisi amandla okufaka ithemba okanye uluhlu lwabathengi ukuze batshatise abasebenzisi phakathi kwezi zimbini. Izintlu zinokulayishwa kwaye zifaniswe nabasebenzisi
Ukuqonda okuQhelekileyo kokuQhuba ukuQhuba, ukuBandakanyeka kunye nokuGuqulwa kwiMithombo yeendaba
NgoLwesihlanu, Julayi 24, 2015 NgoLwesihlanu, Julayi 24, 2015 Douglas Karr
Ngaba siye sakhwaza ngokwaneleyo malunga nomxholo obonakalayo? Andicingi njalo. Sele sabelane nge-infographics kwiincoko zokubalisa kunye nendlela yokusebenzisa iintlobo ezahlukeneyo zemixholo ebonakalayo eqhubeka nokusebenza. Ndicacisa le nkqubo kumthengisi wasekhaya kule veki kwaye babenexesha elinzima kakhulu lokukholelwa ifuthe lokuba umxholo wemihla ngemihla obonwe kwi-intanethi unokunceda ishishini labo. Ndithe ndikhona, ndathatha i10
Impembelelo yokuThengiswa kweQela lokuQala ngokuchasene neDatha yeQela lesiThathu
NgoLwesibini, Juni 23, 2015 Douglas Karr
Ngaphandle kwembali abathengisi abaqhutywa yidatha abathembele kwidatha yomntu wesithathu, isifundo esitsha esikhutshwe yi-Econsultancy kunye noMqondiso sibonisa utshintsho kwishishini. Uphononongo lufumanise ukuba i-81% yabathengisi banika ingxelo yokuba bafumana eyona ROI iphezulu kumalinge abo aqhutywa ziidatha xa besebenzisa idatha yomntu wokuqala (xa kuthelekiswa ne-71% yoontanga babo kwindawo yesiqhelo) nge-61% kuphela ekhankanya idatha yomntu wesithathu. Olu tshintsho kulindeleke ukuba lube nzulu, nge-82% yabo bonke abathengisi abacwangcisiweyo abacwangcisela ukonyusa abo
Njengama-apile kunye netshizi, i-imeyile kunye neNtengiso yezeMidiya yoLuntu
NgoLwesibini, Oktobha 28, 2014 NgeCawa, Oktobha 26, 2014 Douglas Karr
Ndiyasithanda eso sicatshulwa kuTamsin Fox-Davies, uMphathi oPhezulu woPhuculo kuQhakamshelwano oluQhelekileyo, echaza ubudlelwane phakathi kweendaba zosasazo kunye nentengiso ye-imeyile: Imidiya yoluntu kunye nentengiso ye-imeyile zifana netshizi nama-apile. Abantu abacingi ukuba bayahamba kunye, kodwa ngamaqabane afanelekileyo. Imithombo yeendaba kwezentlalo inceda ukwandisa ukufikelela kumaphulo akho e-imeyile kwaye unokwakha ukuthumela kwakho. Okwangoku, imikhankaso elungileyo ye-imeyile iya kubenza nzulu ubudlelwane onabo kunye nabantu onxibelelana nabo kwimidiya yoluntu, kwaye ujike